Raha misy miadana ny dian'ny fiainana tadiavinao, Avy eo ianao eo amin'ny toerana tsara. Sary; Fields ny lavender, tanamasoandro sy ny hazo oliva ... A Alahady sakafo antoandro eo ambany aloky ny hazo fiaramanidina tany amin'ny tanàna iray kianja, ny café lakirema amin'ny sisin-dalana café miaraka amin'ny fandehandehanana amin'ny alalan'ny ala ny hazo oaka sy ny hazo platana ho toy ny tsy fahalevonan-kanina. Izany no Provence – ny zavatra mba hijery sy ny fomba ahatongavana any.
Izany no iray amin'ny lehibe faritra fifanoherana sy ny fifandraisana. Provence manafina ny fahasarotana teo ambanin'ny efitra lamba tsotra mahafinaritra. Ny an-trano ny loko mena ny Esterel tendrombohitra, ny fanandramana tapenade, ny hanitry ny Rosemary, ny cadence ny Provençal lantom-peony sy ny mistral, ny rivotra izay mitsoka midina avy any Alpes. Toy izany, ny fiaraha-mientana dia tahaka be, koa! Aoka isika hanampy anao!
Avy Marsa 1 2019 ny 5 Janoary 2020, ny CARRIERES de Lumieres, Fihadiam-bato vato teo aloha lasa zavakanto immersive tranom-bakoka ao Les Baux-de-Provence, Tompon'ny maro ny fampirantiana natokana ho Vincent Van Gogh ny sangan'asa.
Izany mahavariana mozea mandalina ny tantara, kolontsaina, ary ny sivilizasiona ao amin'ny faritr'i Mediterane amin'ny alalan'ny fampirantiana anthropological, miodina kanto fampirantiana sy ny horonan-tsary. Ny famoriam-bola mipetraka ao amin'ny fahasahiana, trano maoderina natao ny Alzeriana-teraka, Marseilles nahita fianarana architect Rudy Ricciotti, ary Roland Carta. Izany dia mifandray amin'ny alalan'ny Fanina-footbridge nitarika ny faha-13 tamin'ny taonjato Fort St. John, izay misy mahatalanjona hevitra ny Vieux Port ranomasina sy ny manodidina.
Benedict XII, izay nanorina ny Old Palace ny atsinanana sy avaratra. Ary ny mpandimby Clément VI izay nanorina ny New Lapan'ny any atsimo sy andrefana. Ny tilikambo ity tranon'ny ny 11 tantara ao amin'ny Departemantan'ny Archives. Ny haavon'ny 52 metatra mahatonga anao Fanina. Jereo ny amin'ny ho afaka amin'ny lavarangana ny Utopia MANUTENTION Cinema, ary ianao hahita zavatra holazaina!
Ny Lapam-panjakana mandrindra hetsika ara-kolotsaina, foto-kevitra Tours, fampirantiana sy ny rindran-kira mandritra ny taona. It also houses within its walls the Musee de l’Oeuvre. In fahavaratra, lehibe fampirantiana zavakanto maka ny Lehibe Chapel raha ny Main Courtyard lasa iray misokatra-rivotra amin'ny fampisehoana teatra avy amin'ny Avignon, Provence Theater Festival noforonin'i Jean Vilar in 1947.
Deep dive into rural France and discover Roman heritage among the rolling vineyards. Marvel at the Triumphal Arch and the Roman amphitheater. Travel avy eo amin'ny mahavokatra tanim-boaloboka ny Châteauneuf-du-Pape, Provence sy ny santionany divay eo an-toerana nandritra ny fivoriana nanandrana. Mahafinaritra ny UNESCO World Heritage-voatanisa Pont de Gard - Romana lakan-drano. Tsidiho ny Moyen Âge tanànan'i Les Baux de Provence. Mihantona ny avo ao amin'ny Alpines tendrombohitra, ary hahita ny Provençal vohitry ny Gordes sy Roussillon.
By Train, mazava ho azy! Rail mandeha any Provence dia nomen'ny mainline fiarandalamby, anisan'izany ny haingam-pandeha TGV, atsimo avy any Paris, amin'ny alalan'ny Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, sy Marseilles, dia nanaraka ny morontsiraka Mediterane (tsy avo hafainganam-pandeha) ny Nice, Frantsa. Afaka mahazo ny tapakila ao amin'ny minitra avy Save A Train
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/provence-see-get-there/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)